Izixhobo zoKhathalelo lweMoto-iKangton Industry Co., Ltd.
Inkathazo athe wonke umqhubi wemoto wayifumana ngamanye amaxesha okanye enye: Ungena emotweni, ujike isitshixo sokucima kwaye akukho nto yenzekayo. Mhlawumbi ukuthintitha okufutshane okanye ukuphefumla okokugqibela, kodwa isithuthi asizukuqala. Emva koko kufuneka ucele uncedo kummelwane wakho. Kodwa ukuba akukho mntu uza kukunceda ngesiqalo sokuqala, inkonzo yokonakala inokukhawuleza ibize. Uncedo lunokubonelelwa ngetshaja yebhetri ethi ihlawule ngokukhawuleza ibhetri yemoto. I-Kangton ibonelela ngoluhlu lweetshaja zebhetri ngobukhulu obahlukeneyo kunye neenguqulelo, ukusuka kwimodeli eyi-compact robust ukuya kwitshaja yamasifundisane yamandla aphezulu enevolthi yetyala eguqukayo.